Nagu Saabsan - Xinhong Mech & Elec Co., Ltd.
Qalabka Kaabista Rosin
Maskaxda Wejiga Sublimation
Waraaqda Beddelka Kuleylka
Kuleyliyaha Kuleyliyaha Kuleylka
Waxaa la aasaasay 2002, kooxda Xinhong Group ayaa dib-u-habeyn ugu fidisay howlaheeda sanadkii 2011, iyada oo diiradda saareysa cilmi baarista iyo horumarka, howsha iyo kor u qaadista qalabka wareejinta kuleylka muddo 18 sano ah. Xinhong Group waxay heshay shahaadada maareynta tayada tayada ee ISO9001, ISO14000, OHSAS18001 oo ay weheliso badeecadaha CE (EMC, LVD, MD, RoHS) shahaadooyin, waxayna heshay tiro ka mid ah rukhsadaha gudaha iyo dibaddaba. Kooxda Xinhong waxay taageertaa falsafada ganacsiga ee macaamilka marka hore, aqbala isbedelka, wada shaqeynta, rabitaanka, daacadnimada, iyo u heelnaanta. Ka sii gudub baahiyaha macaamiisha, waxaan u hogaansannahay aragtida ah u adeegida macaamiisha si ka wanaagsan, waxaanan go'aansanay inaan soo saarno alaabada korna u qaadno waayo-aragnimada isticmaale, sidoo kale kooxaha macaamiisha ballaaran waxay ku raaxeystaan ​​tayo sare, xasilloon, iyo alaab la awoodi karo. Alaabada ay sameysay kooxda Xinhong Group ayaa ujeedadeedu tahay inay u adeegaan shan koox macaamiil ah. Kooxda 'Xinhong Group' waxay si daacadnimo leh ugu martiqaadaa inta badan iskaashiga istiraatiijiyadeed inay ku soo biiraan, isla markaana soo bandhigaan alaabo badan oo loo yaqaan 'Xinhong' waddankooda si macaamiisha badani u wadaagaan qalab tayo sare leh oo la awoodi karo!
Fts Farshaxanka & Hiwaayadaha
Taxanahan waxaa ka mid ah EasyPress 2, EasyPress 3 iyo MugPress Mate, oo u adeegaya farshaxanada iyo xiiseeya farshaxanada. Isticmaalayaashu way wada isticmaali karaan mashiinka waraaqaha yaryar si wada jir ah. Crafts DIY wuxuu ku habboon yahay in lagu kobciyo xirfadaha shaqsiyadeed, loo habeeyo hadiyado si wada jir ah si loo xoojiyo saaxiibtinimada ka dhexeysa asxaabta isla markaana kor loogu qaado wada noolaanshaha qoyska
Fts Promotional Items & DIY Ideas
Alaabadan taxanaha ahi waxay kujiraan qalab aasaasi ah, oo ay kujirto mashiinka wareejinta kuleylka, mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka, mashiinka mashiinka mashiinka, qalin daabiyaha, daabacaadda kubada, daabacaha kabaha, iwm. Qalabkaani waxay la kulmayaan astaamaha u gaarka ah hadiyadaha iyo garashada hal abuurka DIY, waxayna si balaaran u khusaysaa alaabada sida sublimation, wareejinta kuleylka, vinyl wareejinta kuleylka, wiyisha iyo wixii la mid ah. Isticmaalayaashu waxay iibsan karaan daabacaadaha sida EPSON iyo Ricoh si ay u gaaraan sublimation iyo wareejinta kuleylka, ama iibsadaan aalad aasaasiga ah goynta si ay ugu dhigmaan vinyl wareejinta kuleylka (HTV), oo si ballaaran loogu isticmaalo dharka, qalabka isboortiga, is-beddelka hadiyadda, iwm.
Omi Xafiiska Saynisyeynta Xirfadle ama Soo-saar
Taxanahan alaabooyinku waxay u adeegaan warshadaha warshadeynta xirfadleyda iyo istuudiyaha dharka lagu habeeyo. Cilmiga Farsamo-yaqaanada cusub ayaa leh cadaadis ballaaran oo labisan (Max. 450kg), heerkul isku mid ah (± 2 ° C), iyo istaroog ballaaran (Max.6cm). Waxaa si buuxda loogu waafaqay noocyada kala duwan ee culayska sareeya iyo culeyska sare sida ATT, Warqadda wareejinta laser Forever, qalabka saxda ah ee heerkulka lagu xakameeyo sida TPU, iyo wareejinta u baahan cadaadis badan oo isku mid ah, sida Chromaluxe Aluminum panels
Textile Warshadaha Xirfadaha ama Warshadaha Xirfadda
Xinhong ayaa magacayga ku kalsoon tahay oo duurka kala iibsiga kulayl muddo 18 sano ah, sidoo kale 6 sano waayo-aragnimo in industry fiirsato rosin. Maanta, waxaan kibir adeegi boqol oo kun oo macaamiisha adduunka oo dhan.
Baijin Industrial Zone, Baizhang Town, Minqing County, Fuzhou, Gobolka Fujian, Shiinaha
© Copyright - 2010-2021: All Rights Reserved. Products Featured - Tags Hot - Sitemap.xml - amp Mobile
Ball Pen Heat Press Machine , Heat Press Waayo, qalimaan , Ball Heat Press Machine , Label Small Heat Press Machine , Heat Press Pen Printer , Labels Heat Press ,